Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ngubani oza kubamba i-UEFA Euro 2028?
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ukonwatyiswa • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Sports • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-UEFA ibhengeze ukuba amalungu ayo anomdla wokusingathwa kwe-UEFA EURO 2028 anango-Matshi 2022 ukubhengeza umdla wabo, ngokuqeshwa kwababuki zindwendwe okuza kubakho ngoSeptemba 2023.
Iibhidi zokubamba iNdebe ye-Euro engama-2028 kufuneka zingeniswe ngaphambi kuka-Matshi 23, 2022.
I-UEFA Euro 2028 imiselwe ukuba iqhubeke ngaphezulu kwemidlalo engama-51 kunye namaqela angama-24.
Iibhidi ezidibeneyo ziyavunyelwa, ngaphandle kokuba amazwe anikezela ngexabiso ahambelane ngokwendawo.
Umbutho olawulayo webhola ekhatywayo waseYurophu uvule ibhidi kumazwe aseYurophu namhlanje ukuba abambe imidlalo yeNdebe ye-Euro ka-2028.
The Umbutho weManyano yeBhola ekhatywayo yaseYurophu (UEFA) ubhengeze ukuba iibhidi zokubamba i-UEFA Euro 2028 kufuneka zingeniswe ngaphambi komhla wama-23 kuMatshi 2022.
"UEFA ibhengeze ukuba amalungu ayo anomdla wokusingathwa kwe-UEFA EURO 2028 anayo kude kube ngu-Matshi 2022 ukubhengeza umdla wabo, ngokuqeshwa kwababuki zindwendwe okuza kubanjwa ngoSeptemba 2023, "yatsho i-ofisi yeendaba ye-UEFA kwingxelo.
"I-UEFA Euro 2028 imiselwe ukuba iqhubeke ngaphezulu kwemidlalo engama-51 kwaye ibonise amaqela angama-24, njengoko bekunjalo kwimidlalo emibini edlulileyo," ifundile ingxelo.
"Ukuqinisekisa ukuhambelana nemidlalo yokhuphiswano kunye nefomathi yorhwebo, isiqinisekiso esizenzekelayo seqela (ama) eliza kubamba siya kuqinisekiswa kuphela kumamkeli omnye okanye kwimibutho emibini edibeneyo, njengoko bekuhlala kusenziwa ngaphambili," Isiteyitimenti se-UEFA sathi.
"Kwimeko yemibutho engaphezu kwemibini edibeneyo yokubamba iindwendwe, isiqinisekiso esizenzekelayo sawo onke amaqela abambeleyo asinakuqinisekiswa kwaye siyakuxhomekeka kwisigqibo esiza kwenziwa ngokudibeneyo nezigqibo malunga nokhuphiswano olufanelekileyo," yongeze i-UEFA.
Intshatsheli elandelayo yebhola ekhatywayo yaseYurophu icwangciselwe ukubanjwa yiJamani ngo-2024, ngelixa ushicilelo lwangaphambili lwalubanjelwe ebutsheni bonyaka kwizixeko ezininzi zaseYurophu phakathi kwenoveli yesifo secoronavirus.
The Indebe ye-UEFA Euro ka-2020, eyamiswa kunyaka ophelileyo malunga nokuqhambuka kwe-COVID-19 kwihlabathi liphela, yaqala phakathi kukaJuni 11 noJulayi 11, 2021, kwizixeko ezahlukeneyo zaseYurophu. I-Itali yaphumelela ukhuphiswano lobuntshatsheli eNgilani kumlo wokudubula ngesohlwayo ngobusuku bukaJulayi 11 eWembley Stadium eLondon.